इतिहासमा नै पहिलो पटक साउदीमा अनौठो घट्ना, बिश्व चकित - Khabar Nepali
होमपेज / रोचक / इतिहासमा नै पहिलो पटक साउदीमा अनौठो घट्ना, बिश्व चकित
शुक्रबार, पुष ३०, २०७८
यो साता साउदी अरेबियामा अप्रत्यासित घटना भएको छ । मुस्लिम देश साउदीमा एउटा उन्माद सांगीतिक कार्यक्रम आयोजना भएको छ । धुमधामका साथ चार दिनसम्म सांगीतिक उत्सव मनाइएको छ ।
उत्सवमा अन्तर्राष्ट्रिय डीजेहरुले आफ्नो बेजोड प्रस्तुति दिएका थिए । सांगीतिक महोत्सवमा साउदी शाही परिवारको उत्साहजनक उपस्थिति थियो । सांगीतिक माहौललाई शाही परिवार बस्ने दरबार हाउस अफ साउदले स्वागत गरेको थियो ।
कार्यक्रममा विश्वभरका ख्यातिप्राप्त कलाकारहरुको जमघट थियो । टियस्टो, मार्टिन ग्यारिक्स, डेभिड ग्युटालगायत विश्वप्रसिद्ध डीजेको प्रस्तुतिमा शाही सदस्यहरु झुमेका थिए । ‘इतिहासमा नै पहिलो पटक साउदीमा महिला तथा पुरुषले सँगै नृत्य गरेका थिए । यस एतिहासिक कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदा मलाई साह्रै खुसी लागेको छ,’ डीजे डेभिड ग्युटेले भने ।
साउदीको ‘ठूलो क्रान्ति’ को साक्षी बन्दा महिला र पुरुषबीच कुनै विभेद देखिएको थिएन, न त कुनै महिलाले अनुहार ढाक्ने वस्त्र नै लगाएका थिए । त्यस्तै, कार्यक्रममा कुनै धार्मिक प्रतिबन्ध थिएन् । रेड सी इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभलको अन्तिम दिन सांगीतिक धमका देखिएको थियो । फेस्टिबल निकै रमाइलो भएकाे सहभागीले बताएका छन् ।
२८ रुपैयाँ उधारो तिर्न ६८ वर्षपछी ८५ वर्षका पूर्वसैनिक अमेरिकाबाट फर्केर आएपछी……
विमानमा एक मात्र यात्रु थिए ति युवक जसले ८ घण्टाको उडान समयमा उनले के गरे ? थाहा पाउदा तपाई छक्क पर्नुहुनेछ !
तस्विरमा कमेन्ट गरेर सुरु भएको यो प्रेम कहानी इन्टरनेटमा भयो भाईरल
यी ब्याक्ति जस्ले २०० भन्दा बढी महिलाको…..
साथीको मृत्यु भएपछि…..